Ugu yaraan labo askari oo ku dhintay isku-dhac saaxiibtinimo oo dhexmaray ciidamada DFS oo ka dhacay magaalada Jowhar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan labo askari oo ku dhintay isku-dhac saaxiibtinimo oo dhexmaray ciidamada DFS oo ka dhacay magaalada Jowhar
September 24, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Saldhiga ciidamada booliiska ee magaalada Jowhar.
Jowhar-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo kamid ah ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ku dhintay kadib markii is-rasaasayn dhexmartay ciidamada ilaalada guddoomiyaha Jowhar iyo ciidamo booliis ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa sheegay, in isku-dhaca uu u ekaa mid si khaldan ku yimid kaasoo ay ku lug lahaayeen labada dhinacba.
Dhacdada ayaa xalay oo Jimce ahayd fiidkii ka dhacday xaafada Kulmis ee magaalada Jowhar, iyadoo ay socdeen howlgalo amni.
Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, ugu yaraan saddex qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay is-ku dhacaas.
Jowhar ayaa ah caasimada gobolka Shabeelaha Dhexe, waxayna 90 km ka saarantahay dhanka waqooyi wadada weyn ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya ayaa adkeeyay amaanka magaalada Jowhar, iyadoo magaalada ay martigelinayso shirka maamul u samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
September 26, 2016 Koox hubaysan oo Muqdisho ku dhaawacay xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamada ciidamada DFS
At least two Somali government soldiers killed in friendly fire in Jowhar town
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku fuliyay shan xubnood oo katirsanaa ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland Cabdifataax Xaaji Aadan. Cabdifataax ayaa warbaahinta u sheegay in [...]
Ciidamadii gadoodsanaa ee Puntland oo ka baxay xarunta baarlamaanka
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamadii hubaysnaa oo gadooday qabsadayna xarunta baarlamaanka Puntland ee kutaala gudaha magaalada Garoowe, ayaa lagu soo waramayaa in ay halkaas isaga baxeen. Ciidamada ayaa go’aansaday ka bixida xarunta baarlamaaka kadib markii Islaan Ciise [...]